शालीनता र आदर्शका प्रतीक रामचन्द्र पौडेल - Khula Patra
- शिव मल्ल,
प्रकाशित समय: २१:०४:५८
बाल्टिमोर, अमेरिका । नितान्त नयाँ संघीय संचरनाको चुनावी सरगर्मीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई तताएको छ । कम्युनिष्ट गठबन्धनले तातोको नेपाली राजनीति दोस्रो चरणको उम्मेदवारको मनोनयनसँगै मुलुक चुनावमय भएको छ । चुनावबाट पछाडि फर्कन नमिल्ने राष्ट्रिय परिस्थिति सिर्जना भएको छ । चुनावी राजनीतिले ह्वात्तै तातेको नेपालमा चुनावी ध्रुविकरणका विभिन्न अग्राखहरु पलाए, अझै पलाउंदैछन । कहिले सरकारमा जाने सहमति र वाचा हुन्छ । अनि त्यो तोडिन्छ । विश्वासको वाचा तोडिएपछि अन्यौल सृजना हुन्छ । शंका र संशय पैदा हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा सधै चर्चाको केन्द्रमा रहने एउटा ठाउँ हो प्रदेश नम्वर चारको तनहुँ । त्यही तनहुँले जन्माएका कैयौं लोकतान्त्रिक योद्धा मध्ये हुन् शालीनताका एक उदाहरणीय व्यक्तित्व रामचन्द्र पौडेल । नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापनाकालदेखी आजसम्म निर्विवाद एक छत्र ईमानको मात्र राजनीति गरे, पौडेलले । बीपीका समाजवादी चिन्तन, आदर्श र नीतिलाई देखेर, भोगेर, लेखेर, बोलेर र बोलाएर राष्ट्र हितमा अविचलित लागेका पौडेलको सादगी जीवन नेपाली कांग्रेसकै एउटा पुँजी र प्रतिष्ठानका रुपमा रहेको छ ।
समाजवादी आदर्श, सरल जीवन, निष्ठा र सिद्धान्तबाट कत्तिपनि विचलीत नहुने पौडेलको विशेषता हो । पद पाएर पनि क्लीन चरित्रका रुपमा नेपाली राजनीतिमा आफूलाई उभ्याउन सफल उहाँको व्यक्तित्व भनेको आदर्श, सिद्धान्त, नीष्ठा र विचारनै हो । सदैव मध्यमार्गी धारमा रहेर नेपाली कांग्रेरसको उत्थानमा हर तरहबाट उनी निरन्तर क्रियशील छन् ।
तनहुँबाट कहिल्यै नहारेका भद्र नेता रामचन्द्र पौडेलको आवश्यकता पार्टीभित्र र देशले चाहेको एउटा आवश्यकता हो । गठबन्धन र एकताका नाममा कैयौं व्यक्तिले हारेपनि देश चल्छ । तर अहिलेको मुलुकको संक्रमणकालिन र राजनीतिक ध्रुवीकरणको रापको बेला ठोकुवाका साथ भन्नु पर्दछ, इमान, विचार र समाजवादको राजनीति गर्ने पौडेलको हारले देशले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्नेछ ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता र विसंगति विरुद्ध संसददेखि सडकसम्म अविचलित भएर बोल्ने र लड्ने पौडेल नेपाली जनताका प्रदेश नम्वर चारको नेतृत्व गर्दै मुलुकको एउटा आदर्श समाजवादी प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा सामेल छन । भ्रष्टाचारका कैयौं खेलाडीहरुको पेलान र अवहेलनाबाट पीडित पौडेलका बिजयका बाटाहरुमा धेरै प्रकारका तगाराहरु आईपरेका छन । तर पनि विचलित नभईकन राजनीतिको अविश्राम विजयाभियानमा छन् । भावी प्रधानमन्त्री पौडेलको कन्चन छविका अगाडी पैसाका धेरै खामहरु र गठबन्धनका नाममा खडा भएका तगाराको केही जोड चल्नेवाला छैन ।
राजनीतिमा राजनीतिकर्मीको कसि भनेको आवधिक निर्वाचन हो । व्यक्तिले उसको जीवनभर नछोडेको नैतिकता, कमाएको ईज्जत, बचाएको साख र चलाएको सरल जीवनको हिसाब किताब जनताले चुनावमा गर्दछन । यी सबै गुणलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनमा आत्मसाथ गरेका पौडेलका अगाडी हारका पाटाहरु होलान (आउँलान ! ) तर कलियुगका सच्चा रामचन्द्रको हार रामायणमा रामचन्द्र बनवास जानुपर्दा राज्यले महशुश गरेको अभिभावकत्वको जस्तो हुनेछ ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जन्म वि.सं. २००१ साल असोज ३० गते रिस्ती – २ बाहुनपोखरा तनहुँमा भएको हो । उहाँका बुबाको नाम दुर्गाप्रसाद पौडेल र आमाको नाम ऋषिमाया पौडेल हो । स्नातकोत्तर पौडेलले विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीति थालेका हुन् ।
नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेतामध्येका पौडेलले ३० वर्षे लामो पञ्चायती शासन व्यवस्था विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा पटक–पटक गरी १४ वर्ष जेलजीवन बिताएका छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका सवै आम चुनाव जित्ने देशका थोरै नेतामध्ये उनि पनि पर्छन् । वि.सं. २०४८ सालमा तनहूँ– १ बाट चुनाव जित्नु भएका पौडेल २०५१ र २०५६ सालमा तनहूँ– २ बाट विजयी भए । वि.सं. २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि उनि तनहूँ– २ बाटै विजयी भएका थिए ।
(लेखक मल्ल द नेपाल टुडे डट कमका मेनेजिङ डाइरेक्टर हुन् ।)